Ndine makore 40 nemwana mumwe | Kwayedza
Ndine makore 40 nemwana mumwe
05 Dec, 2014 - 09:12	 2014-12-04T14:49:22+00:00 2014-12-05T09:00:23+00:00 0 Views
TINODA kukuzivisai kuti vose vaimbofona pa0775 515 535 chiregerai, tatenda.
Ndine makore 40 nemwana mumwe, ndiri negative uye ndinoda mukadzi akarongeka ane makore 25 – 40. Ndibatei pa0783 646 077.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane makore 45 zvichidzika kusvika 36. Ndinoshanda, anoda kutorwa ropa uye anotya Mwari ngaandibate pa0717 404 574.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 22 anoda zvekumisa imba, anonamata uye anofarira kugeza. Akanaka anondida anondibata pa0778 383 086.
Makadini veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 29 ndinotsvagawo murume ane makore 32 zvichidzika. Ndichiri mhandara anondida, anoda kunotorwa ropa ngaandibate pa0782 169 903. Macall me back nevarume vevanhu kwete, ndinonamata.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 29 ndinoda musikana ane makore 19 kusvika 24 mukobvu, mutsvuku ari mupfupi. Vanogara muHarare chete vasina chirwere ndibatei pa0733 828 950.
Ndiri mukadzi ane makore 33 ndiri kudawo murume ari pachokwadi anoda kuroora asina mukadzi ane makore 40 – 55. Ndine vana 2, vanoda ndibatei paWhatsApp kana kufona pa0783 042 360.
Ini ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe, handina chirwere uye ndinotsvaga musikana kana mukadzi anoda zvemusha ane makore 18-26 asina chirwere. Anonamata chero chechi anoda zvekutororwa chero nhasi chaiye ngaandibate pa0713 721 074. Ndinonzi Lovemore.
Makadii? Ndiri mudzimai ane vana vatatu, handishandi uye ndinotsvagawo shamwarirume ine makore anopfuura makumi mana inoshanda. Anoda nhare dzangu 0778 091 669.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 ane mazirudo, anoziva Mwari. Nzenza nevakadzi vevanhu kwete, ndibatei nguva dzemanheru pa0777 803 005.
Ndiri murume ane makore 34 nevana 2, ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane vana 1 kusvika 3, ane rudo nevana. Ndibatei pa0715 330 541.
Ndiri mukomana ari HIV negative, ndine makore 25 uye ndinodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 24 anoshanda muHarare chero ane mwana mumwe. Nhamba dzangu 0779 672 056.
Makadii? Ndine makore 26 nemwana mumwe uye ndiri kudawo murume ane makore 30-37 ane vana vaviri kana vatatu asingashushi, anozvishandira kana kushanda. Kunwa kana kuputa hazvina mhosva asi hunhu asasiye. 0716 348 074 ndidzo nhare dzangu.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 22 anoda zvekumisa imba, anonamata uye anofarira kugeza. Akanaka anondida anondibata pa0778 383 086.
Ndinoda kukutendai veKwayedza makandisanganisa neanondida nekudaro ndine urombo vamwe ngavatsvage zvimwe ngavarege kufona pa0713 728 429.
Ndiri kutsvagawo mukadzi wokuroora ane makore 25 zvichidzika ari pachokwadi asina mwana kana chirwere. Ini ndinonzi Zamalex Keryz ndine makore 26, nhamba dzangu dzinoti 0776 196 935.
Ndiri mudzimai ane makore 27 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume ane makore 30 kusvika 40 ari pachokwadi anoda zvemba. Ane mwana ngaandibate pa0771 819 102.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 23 ekuberekwa nevana 2, ndiri HIV negative uye ndiri kutsvakawo murume ane makore 28 kusvika 32. Anoda nezvangu ngaafone pa0772 612 987 asi ari pachokwadi chete.
Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana vaviri, ndinoenda kuchechi uye ndinoda murume ari pachokwadi ane makore 40 kusvika 50. Vanondida ngavandibate pa0772 481 326 asi call me back kwete.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika asiri positive. Ndinoenda kubasa, anotarisika ari pachokwadi ngaandibate pa0774 589 610.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, handina chirwere uye ndinoda mukadzi ane makore ari pasi pe30 ane mwana 1. Handina chirwere, ndinobatika pa0773 871 155.
Ndiri mukomana ane makore 22 okuberekwa, ndinozvishandira uye ndinoda musikana akadzidza akanaka ane makore 18 kusvika 20. Nhamba dzangu dzinoti 0777 384 774, anobhipa kana call back kwete.
Ndinotenda ndakawana wandaida saka vose vachiri kufona pa+27 611 626 731 ngavachirega havo.
Ndiri murume ane makore 49 ndiri kutsvakawo mukadzi ane makore 35 – 40 ari HIV negative seni wokuroora anoda zvemusha. Ngaave ane vana vaviri kana vatatu chete. Vanoda ngavandibate pa0716 527 052 asi call me back kwete.
Ini ndine makore 27 ndinoda musikana ane makore 18 – 25 ari pachokwadi. Ndinoita mabasa emawoko, anoda hupenyu hwemudhorobha nekumusha ngaandibate pa0713 066 206.
Ndiri kutsvagawo murume ane makore 38 asina mukadzi, ini ndine makore 36 nemwana 1. Anonamata ngaandibate pa0735 206 376.
Ndakazomuwana wandaida saka ndapota vamwe chiregai kufona pa0717 137 591, ndatenda.
Ndine makore 36 nemwana 1 uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 38 asina mukadzi, anonamata. Ngaandibate pa0735 206 376.
Ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana mumwe chete ndiri kutsvaga murume ane makore 30 kusvika 35 nevana vaviri kana mumwe chete ari pachokwadi nekuroora asina utachiona hweHIV. Asina mukadzi ngaandibate 0733 981 927.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane makore 18 kusvika 25 wekuroora. Fonai kana sms pa0783 910 035.
Ini ndiri mudzimai ane makore 23 nemwana mumwe chete, ndiri HIV negative uye ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichidzika anoshanda. Nhare dzangu 0771 747 447.
Ini ndiri mukadzi wemakore 25 nevana vaviri ndinodawo murume ane makore 28 — 40 asina chirwere anoda kuongororwa. Ngaave anoshanda, ane rudo uye anoenda kuchechi. Anondida ngaafone pa0778 308 096 asi varume vevanhu kwete.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1, ndinotsvagawo murume akatendeka asina mukadzi. Ngaandibate pa0716 512 182, macall back kwete.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo musikana anoda zvekuroorwa ane makore 18 kusvika 24. Anoda zvake ngaandibate pa0774 949 902.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 2 ndinotsvaga mudzimai wekuroora ane makore 30 kusvika 40, anoda zvemba. Ini basa rangu ndiri painter, ndiri positive asi ndiri mutano zvakanyanyisa. Handinwi doro ende ndinonamata. Anondida anondibata panhamba idzi 0778 276 408.
Ndiri mukomana ane makore 25, HIV negative uye ndinodawo musikana wekuroora anoshanda muHurumende. Andifarira ngaandibate pa0779 672 056.
Ndiri murume ane makore 29 nemwana mumwe ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 25. Anoda hupenyu hwemudhorobha nekumusha ari mukobvu ngaandibate pa0782 467 300.
Ndinonzi Clinty, ndinotsvaga musikana ane makore 20 – 28. Ini ndine makore 32, nhamba dzangu 0771 473 359.
Ndinotsvakawo murume wekuchengetana naye, ndine makore 39 uye ndinoda ane makore 40 kusvika 50. Ndine vana 5, nhamba dzangu 0773 700 703.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvakawo mukadzi wokuroora akavimbika anonamata ari HIV positive. Nhamba dzangu 0715 505 419.
Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba. Anoda ngaandibate pa0775 592 337.
Ndiri mukomana ane makore 28 anove muimbi wemusambo weDancehall uye ndinotsvagawo musikana akavimbika kana kuti mukadzi ane mwana 1. Nhare dzangu 0733 737 035.
Ndiri mudzimai ane makore 43, HIV positive uye handina mwana. Ndinotsvagawo shamwarirume inoda zvekuroora ari HIV positive ane makore 48 kusvika 60 asina mukadzi. Ndinoshanda mumba, vanoda ndibatei pa0777 206 734.